Maitiro ekuisa TeX Live paLinux Mint uye maDerivatives | Kubva kuLinux
Maitiro ekuisa TeX Live pane Linux Mint uye zvinobva
Luigys toro | | Applications, GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Isu tese tinoda kunyora zvichemo zvedu muLatex, vazhinji vanonakidzwa nekushandisa iyi zvinyorwa zvinyorwa system, inoyevedza kwazvo, iine aesthetics huru uye inoreva kusazvibata kwakawanda. Ichi ndicho chikonzero, kutsvaga nzira yeku gadza TeX Live pane Linux Mint 18.1, Ini ndakawana script hombe inoita yakanaka yakachena uye otomatiki kuisikidza maitiro.
Munyori waro atora basa rekugadzirisa iyo script pamwe neshanduro dzichangoburwa dzekuparadzirwa kweTeX uye akagadzirawo bhuku rakanakisa remushandisi iro rakagovaniswa pazasi
1 Chii chinonzi TeX Live?
2 Chii chinonzi kuisa-tl-ubuntu?
3 Dhawunirodha uye Shandisa install-tl-ubuntu
4 Uye chii chandinonyora?
Chii chinonzi TeX Live?
TeX Rarama Ndicho Kuparadzirwa de TeX/LaTeX yakagadzirirwa kuve kutsiva kwe TeTeX, eIyo nzira iri nyore yekutanga neiyo TeX gwaro rekugadzira system. Inopa yakazara TeX system ine macro, mapakeji, uye mafonti, pamwe nerutsigiro rwemitauro yakawanda.
Chii chinonzi kuisa-tl-ubuntu?
Ndicho Shell script yakagadzirwa na Scott kostyshak zvinotitendera gadza Tex Rarama muUbuntu otomatiki, irwo rubatsiro kune vashandisi vanoedza kuchengetedza nguva mune kumwe kuomesa kwakaomesa kweiyi turu (iyo iwe yaunogona kuisa manyore nekutevera izvi maitiro).
Humwe hwakadzama hunhu hwatinopihwa nemusimudziri wayo ndeinotevera:
Inokutendera iwe kuisa TeX Live mune yayo yazvino vhezheni (parizvino TeX Kurarama 2016).
Tsvaga otomatiki iyo inomhanyisa repository.
Inoratidza iyo yekuvandudza uye yekumisikidza maitiro.
Ratidzazve kana gadziriro ikakundikana.
Inogona kushandiswa tlmgr kuchengetedza TeX Live kusvika pari zvino.
Zivisa saka apt haiedze kuisa mapakeji texlive-* sekuvimbika (Semuenzaniso kana ukadaro sudo apt-get install lyx).
Wedzera TeX Live fonti kuti ishandiswe mune yese system.
Nesarudzo yekuisa maLaTeX mafaera asina kuiswa muTeX Live 2016 (–more-tex).
Iyo inoshanda isiri-yekudyidzana uye nekudaro inogona kuwedzerwa kune batch yekumisikidza script
tlmgr Inogona kumhanya kubva kumenyu (Kana iyo 'gksu' package yakaiswa).
Unogona kuisa kubva kuIO faira (-iso).
Dhawunirodha uye Shandisa install-tl-ubuntu
Kuti utore uye ushandise iyo Tex Live yekumisikidza script, ingo nyora repamutemo repamutemo wobva wamhanya script, unogona kuzviita nemirairo inotevera:
git dombo https://github.com/scottkosty/install-tl-ubuntu.git cd install-tl-ubuntu
kana kana usina git unogona kuzviita zvinotevera
wget https://github.com/scottkosty/install-tl-ubuntu / mbishi / tenzi / kuisa-tl-ubuntu && chmod +x ./install-tl-ubuntu
Izvi zvinobva zvaisa zvese zvaunoda kuti iwe ugone kunakirwa neTex Live mukugovera kwako, kurodha pasi nekumisikidza maitiro anononoka asi otomatiki.
Uye chii chandinonyora?
Unogona kupindura uyu mubvunzo nekutenda kumazwi e ngatishandise linux, iyo yakatumirwa yakanaka kwazvo tutungamiriri gwara inonzi LaTeX, kunyora nekirasi
«Nyaya yacho inouya yekuti kune vamwe yakaomesesa. Iyo LaTeX mupepeti akasarudzwa ichave iyo yeSwitzerland mauto banga remushandisi weistist, iyo yaachazopindirana nayo achinyanya kushandisa kugona kuzere kweLaTeX.
Kune akawanda, uyezve, kurongedza faira yeLaTeX chimwe chinhu chinogona kuitwa nechero zvinyorwa zvemavara. Asi isu tinodaidza vapepeti chete avo vanopa maturusi akakodzera ekuita zvese zvinodiwa nekuparadzirwa kwedu kweLaTeX.
Muzhinji hunhu hwevagadziri hwakafanana chaizvo. Ivo vanosiyana zvakanyanya padanho rerubatsiro kumushandisi, ndiko kuti, ivo vanobatsira zvakadii nekodhi, zviratidzo uye nevamwe. Heano mamwe acho:
Ndicho chandinofarira. Sei? Iyo yakakwana kwazvo, ine yakachena uye ine hushamwari interface, ine varoyi uye auto-inopedzisa mirairo, inogadziriswa nyore uye inogadziriswa. »
Kupedza, simbisa kuti kana tangomisa nekuisa maturusi edu, kunyora kunove nechimwe chirevo. Kunaka uye kukomba kwazvinotipa isu hapana mubvunzo chombo chikuru chekurwira munyika umo kusazvidzora kwakarasika zvishoma kana uchinyora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Maitiro ekuisa TeX Live pane Linux Mint uye zvinobva
$ Yourt -S lyx
$ sudo pacman -S kugadzira
Makomputa mavhairasi pane wangu anodikanwa desktop yemurume!